Bogga ugu weyn Imisa Jeegaaga Mushaharka ah ayay tahay inaad isla markiiba keydiso?
Inta badan dadku waxay la yaabaan inta ay tahay inay ka badbaadiyaan jeeggooda; iyadoo inta badan fikradooda ay ku xiran tahay fikradda ah in lacagta la keydsanayo sida caadiga ah lagu go'aamiyo xaddiga la kasbaday iyo liiska miisaaniyadda. Waa hagaag, taasi waxay noqon kartaa run.
Si kastaba ha ahaatee, kooxdayada khubarada maaliyadeed waxay la yimaadeen jawaab ku habboon su'aasha, intee in le'eg ayay tahay in aan keydsado? Ila joog si aad u ogaato.
Xusuusnow, waxa dhisaya amniga maaliyadeed waa xaddigaaga keydinta shaqsiyeed mana aha qasab in dakhligaaga iyo soo -celintaada maalgashi ay soo noqdaan.
Imisa Jeeggayga Lacageed Ayaan Badbaadiyaa Bil Kasta?
Khubaro maaliyadeed oo badan ayaa ku taliya in la keydiyo boqolkiiba 20 jeegaaga mushaarka bil kasta iyadoo la raacayo xeerka 50/30/20.
Sida laga soo xigtay dadka caanka ah 50/30/20 xeer, waa inaad u dhigtaa boqolkiiba 50 miisaaniyaddaada waxyaabaha daruuriga ah sida kirada iyo cuntada, 30 boqolkiiba kharash -ku -talo -gal, iyo ugu yaraan 20 boqolkiiba kaydinta.
Waxaan ku raacsanahay soo jeedinta in la keydiyo boqolkiiba 20 dakhligaaga bishii. Laakiin had iyo jeer ma fududa in la soo jeediyo boqolleyda saxda ah ee dakhliga AAD u keydiso.
Waxaa laga yaabaa inaad weydiiso haddii aan ognahay inta aad hesho bishii iyo kharashaadkaaga bil kasta. Hagaag, halkan waa qodobka ugu muhiimsan, xaddiga aad bil walba keydiso waxaa had iyo jeer saameyn ku yeelan doona heerka dakhligaaga iyo kharashaadkaaga.
Marka, haddii dakhligaagu kaliya ku filan yahay inuu daboolo kharashaadkaaga aasaasiga ah, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad raadsato siyaabo aad ku kordhiso dakhligaaga ama aad u yareyso kharashaadkaaga.
Sida habboon, kharashyada laga jaray dakhliga waa inay la mid noqdaan tiro togan taas oo ah inay kaydiso kayd ahaan.
Waa maxay sababta aan u keydsanayo 20% jeeggayga?
Adigoo ah 20 ama 30 sano jir kasbanaya dakhli bille ah, fikirka hawlgab kaamil ah ama waayeel xiiso leh waa inay kugu filan tahay inay ku kiciso. Si kastaba ha ahaatee, badbaadinta 20% jeeggaaga ayaa had iyo jeer ku anfici doona.
Sida laga soo xigtay Investopedia, Ameerikaanka ayaa si gaar ah ugu xun badbaadinta, ummadduna waxay leedahay deymo aad u sarreeya. Laga bilaabo Maarso 2022, dadka Mareykanka ah waxay haystaan ​​$ 14.3 tiriliyan wadarta deynta, oo ay ku jirto $ 438 bilyan oo deynta kaarka deynta ah. Heerka keydinta shaqsiyadeed ee 2019 wuxuu ahaa 7.6%, wuxuu hoos uga dhacay 11% sanadkii 1960.
Sidaa darteed, 20% ee tagta keydinta waxaa loogu talagalay inay dadka ka caawiso maareynta dakhligooda canshuurta kadib, ugu horrayn inay haystaan ​​lacag loogu talagalay xaaladaha degdegga ah iyo kaydinta hawlgab.
XIDHIIDHKA: 25 Maalgashi ee Ugu Fiican Kanada 2022 | Tilmaan Buuxo
Qof kasta iyo qoys walba waa inay abuuraan koonto sanduuq degdeg ah haddii ay dhacdo kharash lacageed oo lama filaan ah ama duruufo lama filaan ah oo u baahan lacag.
Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad bilowdo kaydinta ugu yaraan 20% dakhligaaga si loo hubiyo hawlgab raaxo leh.
Sideed ku ogaatay inta jeegaaga mushaarka ah ay tahay inuu aado kaydinta?
Fikrad ahaan, waxaad u baahan tahay inaad la socoto kharashaadkaaga si waafaqsan dakhligaaga ugu yaraan hal bil oo buuxa. Ka dib, hoos u dhig kharashyadaas asaasiga ah iyo ikhtiyaariga ah kharashaadka oo isbarbardhig caddadka nooc kasta oo kharash ah iyo dakhligaaga bisha. Ma waxay noqon doontaa wax laga xumaado in la sameeyo?
Tusaale ahaan, aan dhahno qaadashadaada-dakhliga guriga waa $ 5,000 bishii, waxaadna ogaataa in kharashyadaada aasaasiga ahi ay yihiin $ 4,500 bishiiba. Markay sidaas tahay, 83% jeeggaagu wuxuu u socdaa kharashyada asaasiga ah, isagoo kaaga tagaya kaliya 17% kharashyada ikhtiyaarka iyo kaydinta labadaba.
Boqolkiiba kaydka macquulka ah ee xaaladdaasi waa 5-10%, waxay ku xidhan tahay inta aad dareento inaad u baahan tahay kharashyadaas maalinlaha ah.
Si kastaba ha ahaatee, haddii kharashyadaada daruuriga ahi ay yihiin 83% jeegaaga mushaharka, waxaa laga yaabaa inaan kugula talinno inaad baartid kharashyadaada si aad u ogaato meesha laga yaabo inaad awooddo inaad jarto kharashyadaas.
Aan ka eegno dhinacan kale, haddii kharashyada aan ku-talogalka lahayn ay yihiin $ 3,500 laakiin jeeggaagu uu yahay $ 7,000, waxaad kaliya ku bixinaysaa qiyaastii 42% dakhligaaga kharashyada aasaasiga ah.
Xaaladahan oo kale, ma xuma haddii aad geliso wax ka badan 20% jeeggaaga kaydka oo aad weli haysato ku filan si aad ugu adeegto kharashyada asaasiga ah iyo kuwa ku -meelgaarka ah.
Baadhid barnaamijyadeenna miisaaniyadda ugu sarreeya taasi waxay kaa caawin doontaa fikrado badan oo ku saabsan sida miisaaniyad loo sameeyo.
Xagee Aynu Kaydiyaa Lacagtayda?
Waxa xiiso leh, meel fiican oo kaydkaagu waa koonto dulsaar leh. Kani kuma caawin doono oo kaliya inaad kala soocdo koontadaada kaydka koontadaada kharash-maalmeedka laakiin sidoo kale waxay ururin doontaa dulsaar marka kaydku sii socdo.
Ku kaydinta kaydkaaga koonto gebi ahaanba ka duwan waxay kuu sahlaysaa in aad la socoto inta aad ku guulaysatay inaad dhinac iska dhigto. Waxa kale oo loola jeedaa inaadan si ulakac ah ugu bixin doonin xoogaa kaydkaaga kharashyada aasaasiga ah.
Ugu dambayn, kasbashada dulsaar yar waa hab fiican oo lagu kordhiyo kaydkaaga. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad iska hubiso sida lacag loogu keydiyo Starbucks.
XIDHIIDHKA: Dawladaha Ugu Wanaagsan Uguna Wanaagsan Hawlgabka 2022
Kaydkaaga aan hawlgabka ahayn wuxuu geli karaa tiro kasta oo ah noocyada kala duwan ee xisaabaadka dulsaarka leh iyo alaabada maaliyadeed, laga bilaabo koontada kaydka ee caadiga ah oo ay bixiyaan bangiyada badan ilaa xisaabaadka jeegga wax-soo-saarka badan, shahaadooyinka dhigaalka, xisaabaadka suuqa lacagta, Iyo in ka badan.
Isku soo wada duuboo, badeecada kuugu fiican ayaa kuu kala duwanaan doonta iyada oo ku xidhan yoolalkaaga kaydinta iyo baahiyahaaga.
LA XIDHIIDH BADAN: Suuqa Lacagta vs Shahaadada dhigaalka: keebaa fiican?
Maxay yihiin Xeeladaha ugu Waxtarka Badan Kaydinta Lacagta?
Lacagtu si sahal ah uma timaaddo sidoo kale falka badbaadintu ma dhaco iyada oo aan la helin ballan qaad shakhsiyeed. Dadka qaarkood, kaydinta lacagtu waxay noqon kartaa fal welwel leh gaar ahaan marka ay dareemaan inaysan helin dakhli ku filan kharashkooda daruuriga ah. Si kastaba ha ahaatee, shaqsi fekeraya guusha ayaa laga filayaa inuu kaydsado qaddar kasta oo u soo gala dakhli ahaan.
Kooxdeena khubarada maaliyadeed ayaa ku socodsiin doona shanta xeeladood ee ugu sarreeya si aad lacag uga badbaadiso waxa aad ugu yeedho da 'yar.
La soco kharashkaaga
Haddii aad u baahan tahay inaad samaysato qorshe kayd ah, waxaad u baahan tahay inaad ogaato xaddiga soo gala iyo sida aad caadi ahaan u isticmaasho. Tani waxay u egtahay miisaaniyad, sax? Dabcan haa. Si kale haddii loo dhigo, waxaad u baahan tahay a barnaamijka miisaaniyadda si aad ula socoto kharashaadkaaga.
Ogaanshaha hore ee meesha iyo sida aad u isticmaashid lacagtaada ayaa ku siinaysa aragti ku saabsan inta aad kaydin karto, sida loo hagaajiyo, ka dibna sida loo sameeyo koontada kaydka.
Haddii aad ku guuldareysato inaad iska bixiso deymahaaga adoo adeegsanaya habka saxda ah iyo waqtiga saxda ah, waxaad ogaan doontaa inaad ku bixin karto boqolkiiba wanaagsan jeeggaaga bixinta deynta si isdaba joog ah taasoo kugu reebaysa wax yar ama wax aad keydiso.
Waxaa jira laba xeeladood oo aasaasi u ah bixinta deynta: waxaad dooran kartaa inaad marka hore iska bixiso deymaha dulsaarka ugu sarreeya ama aad marka hore bixin karto dheelitirkaaga yar. Halka kii hore macno ahaan uu macno badan samaynayo.
Research waxay muujineysaa in mudnaanta la siinayo dheelitirkaaga ugu yar, oo sidoo kale loo yaqaan “habka barafka, " ayaa ugu waxtar badan. Bixinta deymaha yar inta aad bixinayso deymaha ugu yar waxay kuu sahlaysaa inaad iska bixiso deymaha waaweyn intii aad ka fikiraysay inta deymaha yaryari baaba'aan.
XIDHIIDHKA: Dib -u -eegista Xorriyadda Xorriyadda 2022: Fadeexad ama Dariiqa Sharciga ah ee Macaashka
Dhinaca kale, haddii ay jiraan dulsaar ku lifaaqan mid ka mid ah deymaha, waxaa lagugula talinayaa inaad iska saarto midka leh dulsaarka ugu sarreeya.
Markaad bixiso deyntaada, waxaad u sii deyneysaa lacagtaada hadafyada maaliyadeed iyo keydinta.
See our 17 Fikrado Qurux Badan oo Lagu Bixin Karo Deynta Si ka dhakhso badan sidii hore.
Markaad yeelato fikrad cad oo ah waxa aad bishii ku bixisid waxyaabaha daruuriga ah, waxaad bilaabi kartaa inaad kharashyadaada ku abaabusho miisaaniyad shaqayn karta oo aad qaadato qaacido badbaadin ah.
Miisaaniyaddaadu waa inay qeexdaa sida kharashyadaadu u le'eg yihiin dakhligaaga - si aad u abaabuli karto kharashaadkaaga oo aad u xaddiddo kharash -dhaafka.
Qaado qaaciddada badbaadinta
Tani waxay ka dhigan tahay inaad ka doorato boqolkiiba mushaarkaaga bil kasta oo si adag u taga kaydka. Qaadashada mabda'a 50/30/20 waxay noqon doontaa mid aad u wanaagsan.
Tani waxay kaa sii caawin doontaa dejinta yoolka iyo miisaaniyadda.
Marka hore tixgeli kaydkaaga
Habka ugu fudud ee tan lagu samayn karo waa iyada oo lacag bixinta koontadaada keydinta si otomaatig ah looga dhigo. Tani waxay kaa caawineysaa inay kaa hor istaagto inaad ku qarashgareyso lacagtii loogu talagalay kaydinta waxyaabo kale oo muhiim ah ama xitaa kala duwan miisaaniyaddaada.
Sidaa darteed, samee lacag wareejin soo noqnoqota laga bilaabo jeeggaaga ilaa xisaabtaada kaydka maalin kasta oo mushahar ah.
Ku dhawaad ​​bangiyada oo dhan waxay bixiyaan xawilaad otomaatig ah oo isku xira xisaabaadkaaga jeegga iyo keydinta. Adiga ayaa go'aamin kara goorta, intee in le'eg, iyo meesha lagu wareejinayo lacag ama xitaa laga jari karo deebaajigaaga tooska ah si qayb ka mid ah jeegag kasta ay toos ugu gasho koontadaada kaydka.
Kaydintu aad bay uga adag tahay kasbashada. Adigoo ku dheggan xeerka 50-20-30, shaqsiyaadka waxay leeyihiin qorshe sida ay u maareynayaan kharashaadkooda iyagoo abuuraya qol kayd ah.
In kasta oo nolosha loogu talagalay in lagu raaxaysto, boqolkiiba waxyar oo kaydka ahi ma dhaawici doonto. Had iyo jeer way joogi doontaa si ay kuu badbaadiso.
Markaad keydsato, waxaad u muuqan doontaa mid raaxo leh oo naftaada ku kalsoon.
Sida Loo Joojiyo Lacag -bixinta Nolosha Jeega Jeega | Waad ku farxi doontaa inaad tan aragto
Dib -u -eegista Bixinta Bixinta Deynta 2022: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Xalaal & Khiyaano | Sida ay u shaqayso
Maareynta Lacagta ee Dhallinta 101: Sida Lacag loogu keydiyo Dhallinyarada 2022 -ka
15 apps si aad uga hesho dhar bilaash ah meel kasta oo aad joogto | 2022 La cusbooneysiiyay
Bangiga Chase Online 2022 | Sidee U Shaqaysaa
Bangiga khadka tooska ah ee Chase waa qeybta bangiga internetka ee macaamilka ee JPMorgan Chase, oo ka mid ah…
Sida Lacag Loogu Sameeyo Hoos U Dhac | 15 Siyaabo Hubaal ah 2022
Dad badan, kuwaas oo intooda badan ka maqlay erayada hoos u dhaca ilo badan, kelmada waxay ahayd ...
Ma xuma haddii aad si joogto ah u waydiiso naftaada, 'Immisa xisaabaad baan haystaa?' Inkastoo ay jiraan…
14ka Bangiyada Ugu Fiican Online Sida Chime 2022 | Liis buuxa
Ganacsi kastaa wuxuu leeyahay tartan. Kaliya markaad u malaynayso inaad wada aragtay, waxaad ogaanaysaa mid kale. In ka badan…
Barnaamijyada Miisaaniyadda Ugu Fiican Lamaanaha
Lacagtu had iyo jeer waxay ku jirtaa mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee lammaanuhu u galaan dhammaan noocyada khilaafaadka.…
Habka Qorshaynta Maaliyadda: Tillaabo-Tallaabo Hagaha
Lahaanshaha habka qorshaynta maaliyadeed ayaa lama huraan u ah labada waalid, ganacsiyada, iyo shakhsiyaadka. Ma rabtaa inaad noqoto…